हरेक हत्या र यौन दुर्व्यवहारको मामला सुल्झाउने जादू शब्द डीएनए! मार्टिन भिजल्याण्ड
डीएनए पुलिस र न्यायको नयाँ जादुई माध्यम हो र सबैलाई प्रशंसाको पूर्ण छ! डीएनए संग तपाईं वास्तव मा सबै केहि हल गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंको छिमेकीले मरेको छ भने र त्यहाँ आफ्नो लुगामा डीएनए छ, त्यसपछि हामी जान्दछौ कि हत्यारा भनेको तुरुन्तै हो! यो साँच्चै प्राविधिक प्रगतिमा एक सफलता हो जुन अभूतपूर्व छ।
चक्रको आविष्कार, भाप इन्जिन, बिजुली र ईन्टरनेट सफलताजनक थियो तर डीएनए सम्भवतः सबैभन्दा बढी हो बिरुवा। त्यस डीएनएको लागि धन्यवाद हामी अहिले 100% जान्दछौं भनेर सुनिश्चित गर्दछ कि जोस ब्रेक हत्यारा र निकी वर्टपेनको यौन दुर्व्यवहार हो। यसकारण यो एक हड्डी को आनन्द संग मार्को छ कि निकईको परिवार अन्त मा स्पष्टता छ। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि आमाले आँखामा भयानक हत्यारा हेर्न चाहन्छ!
त्यो डीएनए कसरी काम गर्दछ?
ठीक छ त्यो साँचो हो, हरेकसँग एक अनौठो कोड छ, जस्तै एक पार्सलमा बारकोड सधै अनौठो छ। यसकारण डीएनए हरेक व्यक्तिको लागि अनुपयुक्त छ। उदाहरणका लागि, आमाबाबु र बच्चाहरू बीच समानताहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, किनभने आनुवंशिक विशेषता केही हदसम्म विरासतमा छन्, तर डीएनए कहिल्यै पनि त्यहि नै होइन, अन्यथा तपाईं एक क्लोन हुनेछ। त्यसैले सोच्नुहोस् कि तपाइँसँग कसैको चौथो वा पाँचौं परिवार रेखाको डीएनए छ, त्यसपछि हुन सक्छ त्यहाँ अझै पनि केहि समानताहरू पाउन सकिन्छ, तर त्यसपछि मतभेदहरू पहिले नै वृद्धि भएको हुनुपर्छ।
यस अनूठा कोडको लागि धन्यवाद, तपाईं डीएनए संग देख्न सक्नुहुनेछ कि पनी कसैले कसैले वा केहिसँग सम्पर्क गरेको छ। त्यो पहिले देखि नै छाला छील वा नाक-ग्याङ्ग हुन सक्छ। त्यसो भए आज तपाई आफ्नो पड़ोसीको साथ कफी पाउनु भएको छ, सम्भावना लगभग 99,9% छ जुन तपाईंले आफ्नो घरमा डीएनए छोड्नुहुन्छ। यो सोफेमा उदाहरणको लागि हो जुन तपाईं कफी कपमा वा छिमेकीको कपडामा बस्नुभएको छ, तपाईले एक हात दिनुभएको तथ्यको परिणामस्वरूप। सायद तपाईले कंधेहरूमा फिसाउनुभयो र त्यहाँ केही लुगाहरू वा पकाउने कुखुराहरू लुगा लगाउँछन्।
मानौं कि एउटै छिमेकी भेट्टाएको अर्को दिन उनको घरमा मरेपछि, आमाले फोन गरेर सबै दिन फोन गर्न खोजेपछि। त्यसपछि त्यो मृत हुनेछ, तर यो पूर्ण रूपमा अस्पष्ट छ कि उनी कसरी मर्छन्। एनएफआई को एक ओटोप्सी पछि, यो प्रतीत हुन्छ कि हत्या गर्न को लागी कुनै ट्रेस छैन। अनुसन्धान पछि, प्रहरीले कुनै पनि संकेत दिन सक्ने कुनै पनि कुरा फेला पार्न सक्दैन, तर छिमेकीको कपडा र सोफेमा आफ्नो डीएनए पत्ता लगाउनुहोस्।
स्वतन्त्रता रिपोर्टले यौन सम्पर्कको दिशामा कुनै पनि कुरालाई प्रकट गर्दैन, त्यसैले यसकारण पड़ोसी यौनरुपमा दुरुपयोग गर्ने कुनै कारण छैन।
यद्यपि प्रहरीले तपाईंलाई सोध्नको लागि लिनु भएको छ कि यो पत्ता लगाउन के हो कि त्यहाँ हत्या वा यौन दुर्व्यवहारको कुरा हो भने, तपाइँ3दिन पछि जारी गरिनेछ। तपाईं पुन: राहतको सास फेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईं जान्नुहुन्छ कि तपाईंको डीएनए मात्र पड़ोसीमा फेला पर्यो, किनभने तपाईं उनको साथ कफीमा हुनुहुन्थ्यो।
यौन सम्बन्धमा शंका गर्नुहोस्
अब तपाईं यौन दुर्व्यवहारको मामलामा सोधिएको छ, तपाईलाई एक संदिग्धको रूपमा बुलाइएको थियो। तपाईंले एक होटलमा एक साँझ बिताउनुभएको थियो जहाँ त्यो रात यौन दुर्व्यवहारको मामला थियो। तपाईलाई सोध्नुभएको छ र सबै प्रकारका साक्षी बयानहरूले तपाईंलाई यौन दुर्व्यवहारको मामलामा समावेश गरेको हुन सक्दछ। तपाईं होटलमा एक व्यावसायिक यात्राको लागि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तपाईं यसैले सक्षम हुनुहुन्छ र वास्तविक अपराधीलाई सजाय दिइएको छ। तैपनि तपाईं एक यौन दुर्व्यवहार को मामला मा शामिल भएको छ।
प्रमाण को रूपमा डीएनए
लगभग एक महिना पछि तपाई आफ्नो टेलिभिजन मा जान्छ र तपाईले पीटर आर डी वेल्स द्वारा प्रसारणमा जपमा हेर्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईं अचानक देख्नुहुन्छ कि उहाँसँग छिमेकीको आमासँग भावनात्मक साक्षात्कार छ। पीटर आर डी वेल्सले तपाईंलाई यो हत्याको मुद्दामा मुख्य संदिग्धको रूपमा पक्राउ गर्न कानुनलाई फोन गर्दछ, किनभने तपाईंको डीएनए घरमा फेला पर्यो र तपाइँसँग यौन दुर्व्यवहारको मामलामा पनि संलग्न भएको छ! यो कुनै फरक छैन कि तपाईं आफ्नो छिमेकीको हत्यारे र बलात्कारी हुनुहुन्छ!
के तपाईले यो कस्ता जटिलताहरू देख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ डीएनए खोज्दै यदि 100% केहि को प्रमाण मानिन्छ? तपाईंलाई सधैं आवाश्यक छ। कहीं उपस्थित हुनु भनेको तपाईं हत्यारा हुनुहुन्छ वा यौन दुर्व्यवहार हो। यौन अपराधमा संलग्न हुनुको मतलब यो होइन कि तपाई यौन दुर्व्यवहारको मामलामा दोषी हुनुभएको छ।
डीएनए किन महत्त्वपूर्ण छ?
यो दृढता देखि जस्तो देखिन्छ कि निकयी वर्स्टप्पिन मामला एक मनोविज्ञान (मनोवैज्ञानिक अभियान) हो जसले यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि सम्पूर्ण नीदरल्याण्ड डीएनए नयाँ जादुई शब्द को रूप मा देखिएगा। सम्पूर्ण नेदरल्यान्ड्सलाई सबै कुराबाट डीएनए लिन र यसलाई एक राष्ट्रीय डाटाबेसमा राख्न को लागी राम्रो राम्रो छ भनेर आश्वस्त भएको थियो। यो कानूनी रूपमा यो संभव हुन सक्छ कि यो डीएनए प्रत्येक कानूनी मामला मा प्रमाण को रूप मा (तपाईं अब यो लास ब्रेक को घर को बाहिर लापता मामला मा लापता मामला मा छ र तपाईं को बारे मा वास्तव मा चिंता कानूनी रूपमा अनुमति छैन)।
यो आशा छ कि तपाईं उपर्युक्त एकोडोटबाट केहि स्पष्ट हुनु भएको छ कि डीएनए लाई वास्तवमा अपराधको बारेमा केही भन्न नसक्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि निकई वर्टपेनको अवस्थामा कहिल्यै एनएफआई आटोप्सी रिपोर्टले देखाएको छ कि उनलाई हत्या गरिएको छ। साथै, यौन दुरुपयोग भएको कुनै प्रमाण छैन। यसैले पड़ोसीसँग वर्णन गरिएको तपाईंको मामलाको तुलनात्मक रूपमा तुलनात्मक छ।
के तपाई भविष्यमा त्यस्तो स्थितिमा अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ? यदि नयाँ कानुन तंग छ भने - यस mediahype मामला को लागि धन्यवाद र पीटर आर डी वेल्स को माध्यम ले emobuilding - आउनु, तिमी अहिले छिमेकी संग कफी जान्छ जब कपाल र रबड दहिरो पहिरन गर्नुपर्दछ।
त्यहाँ अन्य कारण हुन सक्छ किन डीएनए डाटाबेसलाई PsyOp मार्फत धकेल्न सकिन्छ? के हुन सक्छ कि अनिवार्य टीकाकरण विधानको साथमा समानताहरू छन् कि लुकाउँछ? त्यसपछि पढ्नुहोस् यो लेख सहमत हुनुहोस्।
ट्याग: 100%, सबूत, कोड, dna, परिवार, विशेष, जोस ब्रेच, म्याच, दुरुपयोग, मोरङ, Nicky Verstappen, पीटर आर डी देम्स, यौन, सञ्चालन, मामला
30 अगस्ट 2018 मा 10: 42
29 जून 2001:
मृत्युको कारण फेरि निर्धारण गर्न सकिँदैन; यौन दुर्व्यवहार पनि प्रश्न गरिरहेको छ। मृत्यु को समय मा कुल अनुसन्धान को नयाँ अनुसन्धान मा उत्पन्न हुन्छ।
1 सेप्टेम्बर 2018 मा 08: 29
यो मान्छे को लागि अनिवार्य पढ्न अनिवार्य छ कि आफैलाई सोच्न सक्दैन (डचको 99%)।
2 सेप्टेम्बर 2018 मा 21: 50
gronz23: यो एक भारी सम्मोहनित व्यक्तिलाई व्याख्या गर्नुहोस्, तीमध्ये धेरै गहिराइ छन्। तिनीहरू यसलाई सुरक्षित ढंगले बदल्छन् र अन्तमा तपाइँले बताउनुभएको छ कि तपाईंले आफैलाई प्रयोग गर्नुभएको छ वा नक्साबाट पूर्ण रूपमा टाढा हुनुहुन्छ। म प्रायः सुन्न चाहन्छु कि म सधैँ सोच्दछ कि तिनीहरू सबै अभिनेता हुन् र सबै कुरा चरणमा राखिएको छ। तिनीहरू मिडियासँग कुराकानी गर्न चाहन्छन्, भले पनि तपाईंले तिनीहरूलाई राम्रो विश्लेषणहरू र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे विवरण दिनुभएको भए तापनि तिनीहरू आफैले मिडियाको कुप्पाहरू जस्तै बोल्छन् र तपाइँलाई बताउनुहुन्छ कि तपाईले आफैंलाई आफैंलाई विश्वास गर्नुपर्छ। भेडा। किनकि, मीडिया भन्नाले, त्यो केवल वास्तविक सत्य हुनेछ, कुनै अन्य सम्भावना छैन। मजाकियाले यो नींबूसँग सच्ची रोकेलीको सम्मोहन वास्तवमा यसको अर्थ हो। तिनीहरूले वास्तवमा त्यो मीठो रसदार फलमा विश्वास गर्छन्, तर यो खट्टे नींबू हो, भले पनि तपाईँले तिनीहरूलाई यो नींबू हो भने, तिनीहरू तिमी पागल हो भनेर भन्दछन्। कहिलेकाहीँ यो पनि अहंकार छ र त्यहाँ केही narcissism छ, अर्को मात्र मेरो बाहेक सही हुन सक्दैन।
« निकवी वर्स्टपेन - जोस ब्रेक पीएसओपी मा एक हत्यारा बनाइयो
राज्यले ठेक्कापूर्वक यौन र जालसाजी गरेको छ »
कुल भ्रमण: 13.868.290